août 26, 2016 – filazantsaramada
Archives quotidiennes : août 26, 2016
ATAOVY HO AMBONY KOKOA NY AMIN’NY FANAHY.
« Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy ? Fa aiza ny sivy? » Lioka 17:17 Rehefa nifanena tamin’I Jesosy ireto boka folo lahy, nijanona teny lavitra teny, Dia niantso hoe: ry Jesosy Tompo ô, mamindrà fo aminay. Ary niteny azy ireo Jesosy hoe mandehana misehoa amin’ny mpisorona. Dia nandeha izy folo lahy, ary sitrana teny […]
Publié parfilazantsaramada août 26, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ATAOVY HO AMBONY KOKOA NY AMIN’NY FANAHY.
“Club FF” Lycée Nanisana/ Rantsana Mpitory an-tsehatra, Sampana STK FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana vaovao.
“Miara-miasa amin’ny Finoana ny mino.” Izany no hevi-dehibe voizin’ny Fiangonana mandritra izao volana Aogositra 2016 izao, no sady volana natokan’ny Fiangonana FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana vaovao ho Iraivolan’ny Rantsana Mpitory an-tsehatra; hanaovan’izy ireo hetsika manokana eo anivon’ny Fiangonana. Tsara ny manamarika fa Andriamatoa Mamy Filoha mpitarika io Rantsana io dia anisan’ireo nahavita ny Fampianarana Soratra […]
Publié parfilazantsaramada août 26, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur “Club FF” Lycée Nanisana/ Rantsana Mpitory an-tsehatra, Sampana STK FJKM Ambohimalaza Firaisana Kanana vaovao.